Fifaninanana “Vivo Energy”: fahaizana mitsitsy solika sy mitondra fiara | NewsMada
Fifaninanana “Vivo Energy”: fahaizana mitsitsy solika sy mitondra fiara
Vita ny 30 jolay teo ny fifaninanana famaranana eto Antananarivo nampanaovin’ny Vivo Energy (Shell extra challenge), anisan’ny mpamatsy solika eto an-toerana. Tanjona amin’ny fifaninanana ny fahaizana mitsitsy, nampanaovina ireo mpanjifa solika Shell, avy eto Antananarivo, Toamasina ary Antsirabe.
Fitondrana fiara vaovao Suzuki Jimny feno solika amin’ny halaviran-dalana 50 km ny nampanaovina ireo mpifaninana. Fantatra izay nandany solika kely indrindra aorian’ny fahavitana 50 km. Tsy nandany indrindra, teto Antananarivo, Razanamahenina Serge, tsy nisy afa-tsy 2,52 litatra tamin’ny lalana 58 km. Samy notolorana fanomezana mitovy mandritra ny taona iray ireo tompondaka telo, Antsirabe, Toamasina ary Antananarivo, nahay nitsitsy indrindra. Mbola hisy fifaninanana famaranana farany avy amin’ireo tanàna telo ireo, hatao ny 6 aogositra ho avy izao. Homena ilay fiara Suzuki Jimny izay mandresy amin’izany, fiaraha-miasa eo amin’ny Shell sy Sicam, mivarotra io karazana fiara io.
Ny taona 2015, nanomboka nivarotra eto Madagasikara ireo karazan-tsolika vokariny ny Shell
(Super Extra sy Diesel Extra). Mitovy kalitao any amin’ny firenen-kafa rehetra ny amidy eto an-toerana. Kalitao niainga avy amin’ny fikarohana efa maherin’ny 100 taona. Nilaza ny Vivo Energy fa fahaizana mitondra fiara miaraka amin’ny fampiasana solika tsara kalitao ny ahafahana mitsitsy bebe kokoa.